Otu ụlọ ọrụ KB - Kimroy Bailey Group
KB Group nke Companieslọ ọrụ
KB Group nke Companieslọ ọrụKimroy Bailey2018-08-14T16:08:14-05:00
The Kimroy Bailey Group nke Companieslọ ọrụ
Kimroy Bailey Group bụ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ijeri dollar na ụwa na nnukwu ọzụzụ mmekọrịta ụwa, Nlekọta Usoro Azụmaahịa, ationlọ Ọrụ Nkwado na Software maka Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Robotics. Ndị otu KB na-ejikọ ọnụnọ ike mmeghari ohuru na Robotics na ọgụgụ isi. Otu a na-arụ ọrụ ugbu a na Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, Miami na Manchester. Ndi Kimroy Bailey Group nke Ndi otu nwere Kimroy, nwunye ya mara mma Sherika na ezigbo nwa ha, Keilah Bailey. Ndị Baileys ji nganga kwere na Popsie (Chukwu) na ike nke Ọbara nke Jizọs Kraịst.
Ndị otu Kimroy Bailey Group nke ụlọ ọrụ gụnyere Kimroy Bailey Renewables, Kimroy Bailey Robotics, na Kimroy Bailey Foundation wee bido ọrụ na Disemba afọ 2011.
N'ime afọ ndị gafere anyị arụgoro ọrụ azụmaahịa anyị, ewezuga Antarctica anyị enyerela ndị ahịa aka na kọntinenti ọ bụla. Ebumnuche anyị rapara na mgbọrọgwụ anyị nke ịgba mbọ hụ na anyị nyere ahụmịhe kachasị mma yana ọrụ pụrụ iche nye ndị ọrụ anyị ka anyị na-anya ọdịnihu nke Ngalaba Renewable Energy na Robotics ọdịnihu.
Anyị na-elele otu Kimroy Bailey Group nke ụlọ ọrụ dị ka anyị na-ewulite ozu. Anyi nwere ogwe aka abuo nke ulo oru ndi ozo, KB Renewables na KB Robotics. Ọhụụ anyị sitere na ọkwa dị elu bụ ịgbasa ma jikọta ogwe aka abụọ a nke azụmaahịa ahụ n'otu ụzọ ahụ ogwe aka mmadụ na-arụ ọrụ ọnụ iji bulie nnukwu ahụ ahụ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ka anyị na-ewulite anụ ahụ na-etinye ọnụ, ụkwụ, ụkwụ nke Otu a anyị ga-agbasawanye na mpaghara ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso.
Maka ndi n’acho iju anya ma na - eche echiche - Kedu maka isi ndi otu? Gịnị bụ ihe ahụ ma ọ bụ Onye bụ ihe ahụ. Ka mụ na nwunye m mee ka ọ pụta ìhè nke ọma - Onye isi nke Otu a bụ Jizọs Kraịst ma anyị na-agbenye ụgwọ zuru ezu na usoro iwu nke Eluigwe. 🙂
2018 - Arụ ọrụ dara na Europe na Eshia
2017 - Gbasa arụmọrụ n'ime United States na Latin America
2016 - Mepụta Rasta Robot ma bido ịnye ọrụ n'ichepụta ihe
2015 - Amalitere Ọzụzụ Nkụzi na Mbara Igwe Mbara Igwe
2014 - Mepụtara Kity Robotics mbụ anyị
2013 - Kimroy Bailey Robotics malitere
2012 - Kimroy Bailey Renewables malitere
2011 - Malitere Kimroy Bailey Foundation
Dị ka ọ dị n’elu-igwe, otu a ka ọ dị n’ụwa. Ebum n’uche anyị bụ ka anyị were akụ nke igwe, ikuku, anyanwụ na ihe niile emere Righavụ ma jiri uche nke Eluigwe rụọ ọrụ anyị niile.
Ọhụụ anyị ga - abụ ụlọ ọrụ kacha nwee ọganihu n'ụwa ma kesaa akụnụba ahụ site na inye ndị ahịa na ndị ahịa anyị ike ịba ọgaranya. Ebumnuche anyị bụ ka anyị jide n’aka na ndị ọrụ ha nwere obi ụtọ ma na-eme ihe Eluigwe n’usoro iwu ha. N’Aha Jisos, Amen.
KIMROY BAILEY - EGO
Kimroy Bailey bụ otu n'ime Ndị Ntọala nke rolọ Ọrụ Kimroy Bailey ma bụrụ onye nrụpụta kachasị ukwuu n'ụwa na mpaghara Renewable Energy na Robotics
SHERIKA TROTT-BAILEY - EGO
Sherika Trott-Bailey onye guzobere otu ụlọ ọrụ Kimroy Bailey otu n'ime ndị isi azụmaahịa ụwa